ခရီးဒဂျောင်းထဲ အတူမသွားရ Security First | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ခရီးဒဂျောင်းထဲ အတူမသွားရ Security First
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on May 9, 2016 in Myanma News, Opinions & Discussion | 13 comments
အိပ်ခါနီး ဖဘမှာ ပို့စ်တွေလျောက်ဖတ်ရင်း သမတဦးထင်ကျော်၊ ဇနီးဒေါ်စုစုလွင် နဲ့ ဒေါ်စု လောနိုင်ငံ ခရီးသွားတာ သတိပေးချင်တယ်… သိပ်အရေးကြီးပါတယ်၊ ဒီလိုမျိုး ထပ်မဖြစ်သင့်ပါ။ ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲ ဖြစ်လေသလား၊ ဂရုမစိုက်ဘဲ ဇွတ်လုပ်လေသလား… မလုပ်သင့် မလုပ်အပ်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်တခုလုံး ရေစုန်မျှောသွားနိုင်သည့် ကိစ်စပါ။ ခုချိန်ထိ ဘယ်သူမှ ထောက်ပြတာလည်း မတွေ့….။ နီးစပ်သူများ လက်တို့အသိပေးကြပါ…
လေယဉ်တစီးထဲ (အဲဒီလေယဉ်ကလည်း မြန်မာ့လေဂျောင်းပိုင်လေယဉ်) သမတနဲ့ ဒေါ်စု အတူစီးခြင်းပါ။ လုံခြုံရေးစည်း အတိအလင်း ကျိုးပေါက်ပါတယ်။ အန်အယ်လ်ဒီပဲ ညံ့လေသလား၊ သမတရုံးပဲ ရှော်လေသလား…. ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ အဲလို မလုပ်ဘူး။ နံပါတ်၁ နဲ့ ၂ ဘယ်တော့မှာ ခရီးအတူ မထွက်ကောင်းဘူး၊ အခမ်းအနား တက်ရင်တောင် သိပ်သတိထားရတယ်။ ယူအက်စ်၊ ယူကေ တို့မှာ အတိုက်အခံပါတီကို ရှဲဒိုးအစိုးရ ဖွဲ့ပေးထားရတယ်။ မပြောကောင်း မဆိုကောင်း အစိုးရအဖွဲ့ တခုလုံး တခုခုဖြစ်ရင် တိုင်းပြည် အထိန်းအကွပ် မဲ့သွားမှာစိုးလို့။ မြန်တြံ့ပြည်မှာ အဲဒါထက် ပိုပါတယ်။ အာသာငမ်းငမ်း ချောင်းနေတဲ့ ကျားဆိုးက အဆင်သင့်… အလစ်ဝင်ညှောင့်မည် ဝံပုလွေအုပ်က သွားရည်တမြှားမြှား….။
အကယ်ရွေ့ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဖြေဖို့ ဒီချုပ် ဘာပြင်ထားသလဲ..။ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဒုသမတ ၁ က ယာယီအုပ်ချုပ်သွားမှာနော… ရက်ပိုင်းပဲထားဦး.. အခန့်မသင့်ရင် အားလုံးရေစုန်မျောသွားလိမ့်မည်။ နောက်ပြီး သမတနဲ့အတူ ဒေါ်စု အတူခရီးသွားမည်၊ နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေးတက်မည် ဆိုထားသမို့ လေယဉ်ပျံနှစ်စင်း မတတ်နိုင်တဲ့ လူမွဲတိုင်းပြည်မှာ ဘယ်လို စီမံကြမည်နည်း။ အမှားဆိုတာ ပြစ်တင်ဖို့ထက် သင်ခန်းစာယူဖို့ဆိုရင် ဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သလဲ နောင်မဖြစ်အောင် အရေးတဂျီး ဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုနေပါပီခမြား..။ ငါကွ….
နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေးမှူ ဦးကြောင်ကြီး
ဟိုးးးး. နဂိုကတည်းက.. ဒေါ်စုက.. နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်တွေမှာ.. သူက..သမ္မတဘေးမှာထိုင်နေမှာပါဆိုပြီး.. ပြောထားတယ်လေ…။
အခုလို့. .အင်္ဂါစဉ်အရ.. ၁နဲ့၂ သွားဖြစ်တော့လည်း.. ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မဒုံး……။
လုံခြုံရေး စည်းကမ်းအရ မကျူးလွန်သင့်တဲ့ အမှားမျိုး.. အူးမာမွပ်။ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ တစ်နဲ့နှစ် အတူမသွားဘူး။ စစ်အဆိုးဓမြခေတ်မှာလည်း အဲလို မလုပ်ဖူး။ ဒီလောက်ထိ လာဘ်လွတ်စပယ် မဖြစ်သင့်ဘူး။ နိုင်ငံတခုလုံး ကသောင်းကနင်း ဖြစ်သွားမည့်အမှား…။
အုကြောင် မှန်ဒယ် အုကျောင် တော်ဒယ်
သမ္မတကြည်ဘဲလည်း သွားလို့မဖြစ် ဟိုရောက်ဘာပြောလို့ ပြောရမှန်းမသိဖြစ်မယ်။ ဒေါ်စု ကြည်ဘဲလည်း သွားလို့မရ ဟိုသမ္မတကိုဖိတ်တာလေ ဒါကြောင့် ဆြာကြောင်ရေ နှစ်ယောက်မမြင်ပါနဲ့ တစ်ယောက်ထဲ တစ်ထပ်တည်းဟုသာ မြင်ပါလော့။ လက်ရှိအခြေအနေက ဒီလိုဘဲတတ်နိုင်မှာကိုး။
တေမင်းက တယောက်ထဲလည်းမြင် နှစ်ယောက်စလုံးလည်း မြင်တယ်ဗျ… ဘယ်လို ဂွဇက်ရွာသားတွေလည်းမသိ… စု ဆိုတာနဲ့ နိုင်ငံရေး ပြေးကပ်တော့တာပဲ… ခုပြောတာ လုံခြုံရေး ရှုထောင့်ဗျ… ငှာလခွီး…
လုံခြုံရေးမဟာဗျုဟာအရ ဆြာကြောင် ပြောတာကို လက်ခံပါတယ်ဗျာ။
ဒါပေသည့် နှစ်လွှာပေါင်းတစ်ရွက်အုပ်ချုပ်မှုနိုင်ငံရေးနဲ့ ဒို့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတော့ ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲလေ။
ဒီအခြေအနေကို ပြုပြင်ချင်ရင် ဟိုခြေဥကို ထုခြေနိုင်ပါမှလေ။ ခက်တာက ဥထဲမှာ အဲဒီခြေဥက အတော်မာကြောနေတာကိုး။ ခြေဥကို အသေထုရင်လည်း အဘား အဘား အော်မယ့်သူတွေက တန်းစီနေလေတော့ ထုရခက် မထုရခက်နဲ့ ခုထိဥဘ၀ မပျက်ဘဲရှိနေတာကို ဆြာကြောင်လည်း သိသားနဲ့ကွယ်။
အူးကြောင် ပြောချင်တာက အနည်းဆုံး တစ်ယောက် လေယာဉ်တစ်စီး နဲ့ သွားသင့်တယ် လို့ နေမယ်။
အဲ့ဒီ လိမ်ဗျံဂျီး တစ်ခုခု ဖြစ်ပြီး ဝုန်းသွားရင် ပွဲပြီးပါပြီ မြန်မာပြည် ဖြစ်သွားမယ်ကော။း)
အယူသည်းတဲ့ ဘက်က ပြောတာမဟုတ်..
Just in case တို့ Back up plan တို့ အရ ပြောရရင် ဒါ ရှောင်ရမှာ..
ဒါမှ ပညာရှိ ဦးကြောင်ကွ။ ဦးကြောင်ကို ရာနှုန်းပြည့်ထောက်ခံတယ်။
”နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ လုံခြုံရေးမှူးကြီး ဦးကြောင်”
နိုင်ငံတော်၏ လုံခြုံရေးမှူ ဦးကြောင်ကြီးက ဒီလိုလည်း ဆိတ်ပူပေးတတ်သေးသကိုးးးးး
London has fallen ကိုတောင် သတိရသွားသေးတယ်… Bravo အူးကြောင်